Russia kuda kwairamba cryptocurrency kwema - Blockchain News
Kubvumbi 1, 2018 arun
Russia kuda kwairamba cryptocurrency kwema
Russia anoronga kwairamba cryptocurrency kwema mune ramangwana.
The State Duma uye Bazi Finance vari kugadzirira kuzozivisa mitemo maererano bhuku Kommersant.
Miners ichakurukurwa Entrepreneurs, uye ivo vachava kuchengeta zvinyorwa, uye kubhadhara mitero / yechikoro. Cryptocurrency kwema haazosundirwi kunonyorwa kutoti kutengeserana “kunounza wacho zvikomborero zvemari.”
Vanoita zvemitemo kuda kuisa mutero unodiwa pamusoro cryptocurrencies kuti 13%.
asi, maererano nenyanzvi hazvizorevi chinozoiswa pakarepo. Semuyenzaniso, mitero haasati kuziva kuti ichaona miners uye vanoita kuti cryptocurrency.
“The FTS anongoti hazvina ruzivo munzvimbo iyi, kana kunzwisisa sei cryptocurrency exchanges ushande. Pamusoro pe, mamiriro murau inopesana nenhungamiro kusazivana uye rusununguko maererano nokushanda kwenhengo zvigadzirwa mari,” maererano tsamba kubva kuBazi Finance kugadzirisa cryptocurrency yomusi waOctober 13, 2017.
China ari kurambidza vagari kubva vanotengesa pamusoro vatorwa exchanges.
Izvi yakamhan'arirwa ...
Previous Post:OKEx kumisa zvokutengeserana bitcoin neramangwana nokuda evanhu
Next Post:Marita anotangazve munhu pamutemo sandbox kuti kushandisa cryptocurrency uye blockchain ari paIndaneti uchitamba mutambo indasitiri